LibreOffice 6.3.4 inosvika kugadzira zvinopfuura zana nemakumi matanhatu zvigadziriso | Linux Vakapindwa muropa
Anenge masvondo matanhatu apfuura, Iyo Gwaro Sisekelo yakaburitswa v6.3.3 yehofisi yako suite. Nhasi, vhiki mbiri pasati pazororo reKisimusi, kambani yatanga LibreOffice 6.3.4, yechina yekuchengetedza kuburitswa mune ino nhevedzano iri pano kunyanya kugadzirisa bugs. Panguva yekunyora mitsara iyi hapana chekuburitsa chinyorwa cheiyi chaiyo vhezheni, asi kune peji rewebhu rinowanikwa kwavanotiudza nezve zvese chii chitsva mu v6.3 yeiyo suite.
Pamwe LibreOffice 6.3.4 inosanganisira zvinopfuura makumi matatu neshanduko, ruzhinji rwazvo rwaida kukwenya Munyori, Calc, Draw, Impress uye Math. Saka uku ndiko kusunungurwa kukuru, chero bedzi isu tichinzwisisa se "zvakakosha" izvo zvavakaita kuti software iwedzere kuvimbika. Pakati pezvinhu zvitsva mushanduro iyi tine zvigadziriso zvemasaini zvakabviswa kubva kumacro ese paunenge uchigadzira gwaro nyowani kubva mutemplate uye nemasero asina kubatanidzwa zvakanaka mumatafura eVanyori paunenge uchishanda nemagwaro mumafomati eDOCX.
LibreOffice 6.3.4 haisi iyo yakakurudzirwa vhezheni parizvino
Sezvo chero mushandisi weLibreOffice achatoziva, Iyo Gwaro Sisekelo inopa dzimwe nzira dzinoverengeka kune yayo suite: LibreOffice 6.3.4 ndiyo yakakwira-kumusoro, zvinoreva kuti ndiyo inosanganisa zvese zvitsva. Izvi zvinoreva zvakare kuti haina kupfuurwa zvishoma pane v6.2.8 iyo, mushure mekuburitswa kasere kwekugadzirisa uye isina zvimiro zvazvino zvishoma zvakaedzwa, inovimbika. Naizvozvo, Iyo Gwaro Sisekelo inoenderera kukurudzira v6.2.8 pane michina yekugadzira.
LibreOffice 6.3.4 yave kuwanikwa yeWindows, macOS, Linux uye mamwe masisitimu anoshanda kubva ku yepamutemo download webhusaiti. Vashandisi veLinux vanogona kurodha vhezheni iyi nyowani muDEB mapakeji (Debian / Ubuntu), RPM (Red Hat) uye mune mabhinari. Kuisa iyo nyowani vhezheni kubva kumahofisi epamutemo tichazofanira kumirira mazuva mashoma, kana mavhiki kana kugoverwa kwedu kweLinux kuchishandisa iyo vhezheni inokurudzirwa yezvikwata zvekugadzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » LibreOffice 6.3.4 inosvika kuzoita zvinopfuura zana nemakumi matanhatu
Iyo yakanaka suite. Ndanga ndichiishandisa kweanopfuura makore mana sekutsiva Microsoft Office nemhedzisiro yakanaka kwazvo. Izvo zvakanaka kune ese iwo akajairwa mabasa anoitwa zuva nezuva.
Ini ndinoikurudzira zvakadaro.
Makumi gumi apfuura yakapfuura mashandiro eiyo MS Office suite uye yaive dziviriro yekupinda munyika yemahara, nhasi ichakamira uye yakapfuurwa zviri nyore nemamwe maviri masutu ehofisi.
Pivot tafura ichiri chimwe chezvikonzero chikuru nei ndisingachinjike kuLO. Uye kurasikirwa kwekuenderana neMSO iyo inosanganisira shanduko (diki, asi shanduko mushure mezvose) zvinoshandura zvinyorwa.
Robolinux 10.6 inosvika ichigadzirira kupera kweWindows 7 rutsigiro